Snn Nepal आखिर किन केरलामा लगातार कम्युनिस्ट गढ बन्दैछ ? – Snn Nepal
आखिर किन केरलामा लगातार कम्युनिस्ट गढ बन्दैछ ?
भारत । दक्षिण भारतको केरला राज्यमा लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रन्टले दोस्रो कार्यकालका लागि विजय हात पारेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि मुख्यमन्त्री पिनाराई विजयनले निर्वाह गरेको भूमिकापछि जनताले दोस्रो कार्यकालका लागि उनलाई अनुमोदन गरेका हुन् । १ सय ४० सिटको निर्वाचनमा ९९ सय सिटमा एलडीएफले बाजी मारेको छ ।
यता कंग्रेस समर्थित गठबन्धन युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्टले भने ४१ सिटमा जित हासिल गर्‍यो । भारतीय जनता पार्टी ९भाजपा० ले भने आफ्नो अस्तित्व नै गुमाएको छ ।
यस्तै, नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्‍याउन पनि त्यस पार्टीको भूमिका उल्लेखनीय छ । केरलाको मोडललाई साम्यवादको नयाँ अवतारका रूपमा समेत परिभाषित गरिन्छ । पुँजीवादी राष्ट्रले प्रविधिमा होस् वा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केरलाकै दक्ष जनशक्तिलाई प्राथामिकता दिने गरेका छन् । केरलाको कम्युनिस्ट मोडको सफलताप्रति विश्वले नै प्रश्‍न गरिरहन्थ्यो, ‘आफ्नो सफलतालाई केरलाले कहिलेसम्म कायम राख्ला र रु’